मौसम परिवर्तनले देशहरूलाई कसरी असर गर्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तनले देशहरूलाई कसरी असर गर्छ?
मौसम परिवर्तनले हाम्रो ग्रहमा विनाशकारी प्रभाव पार्दछ। यसको परिणाम दुबै आवृत्ति र तीव्रता मा दुवै बढ्दै छन् हरितगृह प्रभाव मा वृद्धि।
पृथ्वीको इतिहासमा धेरै मौसम परिवर्तनहरू भएका छन्, यद्यपि यो मानवले उत्पादन गरेको सबैभन्दा तीव्र छ। यसको मुख्य कारण ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जन हो जुन हाम्रो औद्योगिक, कृषि, यातायात गतिविधिहरू, आदि द्वारा वातावरणमा डिस्चार्ज हुन्छ। यद्यपि मौसम परिवर्तन सबै देशलाई समान रूपमा प्रभाव पार्दैन किनकि यसले इकोसिस्टमका विशेषताहरू र प्रत्येक ग्रीनहाउस ग्यासको तातो कायम गर्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ। के तपाई यस बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ?
1 मौसमलाई असर गर्ने कारकहरू
2 मौसममा प्राकृतिक उतार चढाव
3 मौसम परिवर्तनले के असर गर्छ?
4 ग्रीनहाउस ग्यास प्रतिधारण क्षमता
5 पृथ्वीको वार्षिक वर्षामा अवलोकन गरियो परिवर्तनहरू
6 अफ्रिकामा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
7 एशियामा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
8 ल्याटिन अमेरिकामा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
9 साना टापुहरूमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
मौसमलाई असर गर्ने कारकहरू
हामीलाई थाहा छ, हरितगृह प्रभाव प्राकृतिक र हाम्रो ग्रहको जीवनको लागि पूर्ण रूपले आवश्यक छ। यो वायुमण्डल, पृथ्वीको सतह र समुद्रहरूमा ऊर्जा स्थानान्तरण र परिवर्तनको सन्तुलित प्रणाली हो। हरितगृह प्रभावका लागि धन्यवाद, पृथ्वीको मौसम स्थिर रहन्छ र औसत तापक्रमले यसलाई रहने योग्य बनाउँछ। यो स्थिरता उत्पन्न हुन्छ किनभने पृथ्वीले प्राप्त गर्ने उर्जाको मात्रा यो यो एक बन्द बराबर छ। यसले पर्याप्त सन्तुलित उर्जा सन्तुलन निम्त्याउँछ।
यद्यपि वातावरण र ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मानिस र हाम्रो गतिविधिहरूको कारण यो ऊर्जा सन्तुलन असंतुलित हुन्छ। जब भण्डारित कुल उर्जा अधिक हुन्छ, एक तताउने हुन्छ र जब यो विपरित हुन्छ, एक चिसो। हाम्रो अवस्थामा हामी सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्दछौं कि पृथ्वीमा प्राप्त ऊर्जाको मात्रा ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनले वायुमण्डलमा तातो कायमै राख्ने भन्दा धेरै छ।
सन् १ 1750 of० देखि औद्योगिक क्रान्ति शुरू भएपछि ग्रीन हाउस ग्यासहरूको स .्घर्ष वातावरणमा बढेको छ। त्यो त्यस्तै हो जब कोइला र तेल जस्ता जीवाश्म ईन्धनहरू जलाउँदा उद्योग र यातायातका दहन इन्जिनहरूलाई खुवाउन थाल्यो। वायुमण्डलमा ग्रीन हाउस ग्यासहरूको अनियन्त्रित उत्सर्जनले पृथ्वी वातावरण वातावरणमा सकरात्मक ऊर्जा सन्तुलन ल्याइरहेको छ। त्यो भन्नु पर्ने हो, बाह्य अन्तरिक्षमा फर्काइएको भन्दा बढी तातो राखिन्छ।
मौसममा प्राकृतिक उतार चढाव
धेरै व्यक्ति चक्रवाती वा अन्य जलवायु घटनाहरू विभिन्न प्रकारका मौसम परिवर्तनसँग सम्बद्ध गर्छन्। यो सत्य हो कि जलवायु परिवर्तनले अत्यधिक मौसम घटनाक्रमको आवृत्ति र तीव्रतालाई बढाउँदछ, तर ऊर्जा सन्तुलनमा यी असंतुलनहरूको कारण हुने जलवायु परिवर्तनलाई जलवायुको प्राकृतिक उतार चढावका साथ भ्रमित गर्नु हुँदैन।
वास्तवमा, यो सत्य हो भनेर देखाउन, यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि, मौसम तुलनात्मक रूपमा स्थिर भएको बेलामा पनि, भूमिसूचक जलवायु प्रणाली बनाउने प्रणालीहरू तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा उतारचढाव हुन्छन्। सामान्यतया, यी उतार-चढावहरूलाई ओसीलेशनहरू भनिन्छ किनभने तिनीहरू दुई मुख्य राज्यहरू बीच चल्छन्।
यी दोहोरिने क्षेत्र र विश्वव्यापी दुवै मा जलवायु मा ठूलो सान्दर्भिकता र प्रभाव हुन सक्छ। यी दोहोरिएको सब भन्दा राम्रो ज्ञात उदाहरणहरू हुन् केटा र केटी। एल निन्योले मध्य र पूर्वी भूमध्यरेखा प्रशान्त महासागर सतहको ध्यान दिगो तापक्रम निम्त्याउँछ, जुन तीन वा चार रहन्छ। जब यो समुद्री क्षेत्रको तापक्रम सामान्य स्तर भन्दा तल झर्छ, त्यस घटनालाई ला नीना भनिन्छ।
मौसम परिवर्तनले के असर गर्छ?
मौसम परिवर्तनमा बिभिन्न प्रभावहरू छन् जुन यसमा बिभिन्न असरहरू निम्त्याउँदैछ:
इकोसिस्टम: मौसम परिवर्तनले इकोसिस्टममा आक्रमण गर्दछ, जैवविविधता कम गर्दछ र धेरै प्रजातिको बाँच्न गाह्रो बनाउँदछ। यसले चक्रमा कार्बन भण्डारणलाई पनि परिवर्तन गर्दछ र प्रत्येक प्रजातिको बासस्थानहरूलाई टुक्राउँछ। खण्डित बासस्थान जनावर र बोटबिरुवाले सामना गर्नु पर्ने ठूलो खतराहरू हुन् र कहिलेकाँही यसले प्रजातिहरूको लोप हुन सक्छ।
मानव प्रणाली: यसको प्रतिकूल प्रभावका कारण यसले वातावरण, वर्षा, तापक्रम, आदिमा पार्दछ। मौसम परिवर्तनले मानव प्रणालीमा आक्रमण गर्दछ जसले कृषिमा प्रदर्शन ह्रास गर्दछ। उदाहरणका लागि, धेरै बालीनाली चरम खडेरीले क्षतिग्रस्त छ वा उच्च तापमानको कारण हुर्कन सक्दैन, बाली परिक्रमण आवश्यक छ, कीरा बढाउने, आदि। अर्कोतर्फ, खडेरीले सिँचाइ, शहरहरू आपूर्ति गर्ने, सडक धुने, सजावट, उद्योग आदि खानेपानीको अभाव बढाउँदछ। र उही कारणका लागि यसले स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ, नयाँ रोगहरूको उपस्थिति ...
शहरी प्रणाली: मौसम परिवर्तनले सहरी प्रणालीलाई पनि असर गर्छ, यातायात बान्की वा मार्गहरू परिमार्जन गर्नका लागि, नयाँ प्रविधिहरू सुधार गर्नुपर्दछ वा भवनहरूमा स्थापना गर्नुपर्दछ र सामान्यतया यसले जीवनशैलीलाई असर गर्छ
आर्थिक प्रणाली: आर्थिक प्रणालीको बारेमा के भन्ने स्पष्ट रूपमा, जलवायु परिवर्तनले ऊर्जा उत्पादन, उत्पादन, प्राकृतिक पूंजी प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई असर गर्छ।
सामाजिक प्रणाली: मौसम परिवर्तनले सामाजिक प्रणालीलाई प्रभाव पार्छ पलायन परिवर्तनको कारण, युद्ध र द्वन्द्व निम्त्याउँछ, इक्विटी ब्रेकिंग, इत्यादि।
हामी देख्न सक्छौं, मौसम परिवर्तन यस्तो चीज हो जुन हाम्रो दैनिक जीवन र वरपर हामीलाई असर गर्छ।
ग्रीनहाउस ग्यास प्रतिधारण क्षमता
एकपटक हामीले हावापानी परिवर्तनले हामीलाई कसरी असर गर्छ भनेर विश्लेषण गरेपछि हामी कुन कुरामा ध्यान दिनेछौं जुन कुन ग्यासहरू सबैभन्दा उत्सर्जित हुन्छ र तातो कायम राख्नको लागि तिनीहरूको शक्ति। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी यी ग्याँसहरूको बारेमा जति धेरै जान्दछौं, ग्रीन हाउस प्रभावमा भएको वृद्धिलाई कम गर्न हामी जति बढी पक्षहरू प्रयास गर्न सक्छौं।
ग्रीन हाउस ग्यासहरू (GHG) वातावरणमा ट्रेस ग्यासहरू हुन् जसले लामो-तरंग विकिरणलाई अवशोषित गर्छन् र उत्सर्जन गर्छन्। तिनीहरूले पृथ्वीलाई प्राकृतिक रूपमा समाहित गर्छन् र वातावरणमा तिनीहरूबिना ग्रहको तापक्रम degrees 33 डिग्री कम हुनेछ। क्योटो प्रोटोकोल १ 1997 2005 in मा अनुमोदित गरी २०० XNUMX मा लागू भएपछि यसले यी सात हरितगृह ग्यासहरूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्णको रूपमा समावेश गरेको छ।
कार्बन डाइअक्साइड (CO2): प्रत्येक हरितगृह ग्यासलाई वातावरणमा तातो कायम गर्ने क्षमताको आधारमा एकाई दिइन्छ। त्यो एकाईलाई ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) भनिन्छ। CO2 सँग १ CFM छ र यसको उत्सर्जन कुल उत्सर्जनको% 1% अनुरूप छ। आधा CO76 जुन वायुमण्डलमा उत्सर्जित हुन्छ महासागरहरू र जैव क्षेत्रले अवशोषित गर्दछ। अवशोषित नभएको बाँकी सीओ २ सय वा हजारौं बर्ष वायुमण्डलमा रहन्छ।
मीथेन (CH4): मिथेन ग्यास दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हरितगृह ग्यास हो, जसले कुल उत्सर्जनको १%% योगदान गर्दछ। यसको पीसीएम २ 16 हो, अर्थात यसले CO25 भन्दा २ times गुणा बढी तातो राख्दछ, यद्यपि यसको वातावरणमा सान्त्वना धेरै कम छ। यसको जीवन चक्र छोटो छ, यो वातावरणमा लगभग १२ वर्ष लामो हुन्छ।
नाइट्रस अक्साइड (N2O): यो ग्रीनहाउस ग्यास हो जुन सबै उत्सर्जनको%% को लागी जिम्मेदार छ। यसको २6G को एक GWP छ, यद्यपि यो भनिनु पर्छ वायुमण्डलमा 298०% N60O उत्सर्जन ज्वालामुखी जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूबाट आएको हो। यसको लगभग ११2 बर्षको जीवन चक्र रहेको छ।
फ्लोरिनेटेड ग्याँसहरू: यसको ताप र तातो अवधारण सम्भावना CO23.000 भन्दा २,2,००० गुणा बढी शक्तिशाली हुन सक्छ। तिनीहरू 50.000०,००० वर्षसम्म वातावरणमा रहन्छन्।
पृथ्वीको वार्षिक वर्षामा अवलोकन गरियो परिवर्तनहरू
अवलोकनहरूले देखाउँदछ कि हाल रकम, तीव्रता, फ्रिक्वेन्सी र वर्षाको प्रकारमा परिवर्तनहरू छन्। वर्षाको यी पक्षहरूले सामान्यतया ठूलो प्राकृतिक परिवर्तनशीलता देखाउँदछ; र घटनाहरू जस्तै एल निनो र मौसममा अन्य प्राकृतिक उतार चढावको उल्लेखनीय प्रभाव छ।
विगत शताब्दीमा यद्यपि त्यहाँ वर्षाको मात्रामा दीर्घकालीन प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ, उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्वी भागहरूमा, उत्तरी यूरोप, उत्तरी र मध्य एशियामा तर विरलै। सहेल, दक्षिणी अफ्रिका, भूमध्यसागर र दक्षिणी एशियामा। थप रूपमा, यो अवलोकन गरिएको छ भारी वर्षाको घटनामा सामान्य वृद्धि, ती स्थानहरूमा जहाँ वर्षाको कुल मात्रा घटेको छ।
अफ्रिकामा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
अफ्रिका महाद्वीप मध्ये एक हो जुन जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक जोखिममा छ। धेरैजसो अफ्रिकाले कम वर्षा पाउनेछ, केवल मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा मात्र बढेको वर्षाको अनुभव। यो अनुमान गरिएको छ कि अफ्रिकामा शुष्क र अर्ध-सुक्खा भूमिहरूमा वृद्धि हुनेछ २०5० सम्म 8% र%% बीचमा। मौसम परिवर्तनको कारण खडेरी र पानीको अभावका कारण मानिसहरू पनि पानीको तनाव बढाउनेछन्। यसले कृषि उत्पादनलाई क्षति पुर्‍याउछ र खाद्यान्नको पहुँच बढ्दो कठिन हुनेछ।
अर्कोतर्फ, बढ्दो समुद्री तहले अलेक्जान्ड्रिया, कैरो, लोमे, कोटनो, लागोस र मसावा जस्ता तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा अवस्थित ठूला शहरहरूलाई असर गर्ने छ।
एशियामा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
अफ्रिका बाहेकका प्रभावहरू एशियामा देखिने छन्। उदाहरणका लागि, हिमनदी पग्लनेले बाढी र चट्टान हिमस्खलन बढाउनेछ, र तिब्बत, भारत र बंगलादेशको जलस्रोतलाई असर गर्नेछ; यसको फलस्वरूप नदीको बहाव र ताजा पानीको उपलब्धतामा गिरावट आउँदछ, हिमनदीहरू जसरी सुक्छन्। २० 2050० मा, १ अरब भन्दा बढी मानिस पानीको अभावबाट ग्रस्त हुन सक्छन्। दक्षिणपूर्व एशिया र विशेष गरी भीडभाडयुक्त विशाल डेल्टास क्षेत्रहरू बाढीको जोखिममा छन्। विभिन्न दबाव र मौसम परिवर्तनका कारण आगामी years० बर्षमा एसियाका कोरल रीफहरूको लगभग %०% अदृश्य हुने आशा गरिन्छ। वर्षामा परिवर्तनले पखाला सम्बन्धी रोगहरूको बृद्धि गर्दछ, मुख्यतया बाढी र खडेरीसँग सम्बन्धित।
यसले मलेरिया लामखुट्टेको दायरा पनि बढाउन सक्छ र यसले गर्दा बढी एशियाई जनसंख्यालाई पनि असर गर्न सक्छ।
ल्याटिन अमेरिकामा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
यस क्षेत्रमा हिमनदीहरुको पछाडिपट्टि र वर्षाको न्यूनताले कृषि, उपभोग र उर्जा उत्पादनका लागि उपलब्ध पानी कम गर्न सक्छ। उपलब्ध पानीको अभावले खाद्यान्न बालीको उत्पादकता पनि घट्ने छ र यसले खाद्य सुरक्षामा समस्या खडा गर्ने छ।
धेरै उष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरूको विलुप्तताको कारण ल्याटिन अमेरिकाले जैविक विविधताको उल्लेखनीय नोक्सान अनुभव गर्न सक्छ। माटोको ओसको कमीले कारण निम्त्याउँदछ पूर्वी अमेजोनियामा सवाना द्वारा उष्णकटिबंधीय जंगलहरूको क्रमिक प्रतिस्थापन। क्यारिबियनमा अवस्थित अर्को लोपोन्मुख इकोसिस्टम कोरल रीफहरू हुन्, जुन धेरै जीवित समुद्री स्रोतहरूको घर हो। समुद्री सतहको वृद्धिले खास गरी क्यारिबियनमा तल्लो तराईका क्षेत्रहरूमा बाढीको जोखिम बढाउनेछ।
साना टापुहरूमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव
धेरै साना टापुहरू, उदाहरणका लागि क्यारिबियन र प्रशान्तमा, पानीको स्रोतमा यस्तो कमी आउँछ कि तिनीहरू कम वर्षाको अवधिमा माग पूरा गर्न अपर्याप्त हुनेछन्। समुद्री सतहको बढ्दो कारणले मिठो पानीको स्रोतमा मिठो पानीको प्रवेश हुनेछ र फलस्वरूप यो पिउन योग्य हुनेछैन। साथै समुद्री तहको बृद्धिले बाढी, आँधीबेहरी, कटाव र अन्य खतरनाक तटीय घटनाहरू तीव्र पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, बस्ती र टापु समुदायहरूको बाँच्नका लागि आवश्यक सुविधाको लागि खतरा प्रस्तुत गर्दै। तटीय अवस्था र कोरल ब्लीचिंगको विकृतिले पर्यटन गन्तव्यको रूपमा यी क्षेत्रहरूको मूल्य कम गर्दछ।
तपाईले देख्नु भएको छ, जलवायु परिवर्तनले बिभिन्न क्षेत्रहरूलाई बिभिन्न तरीकाले असर गर्छ तर यसमा केही समानता छ: यसले सबै मार्गहरुमा उसको बाटो नष्ट गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनले देशहरूलाई कसरी असर गर्छ?
केप हॉर्न, मौसम परिवर्तन को पठाउनुहोस्